Nenguva ino, ndinovimba kuti iwe unofara pamusoro pemikana yekuita iwe purojekiti yako yedijiti. Kana iwe ukashanda kune imwe kambani ye tech tech, iwe unogona kunge uchitove uchiita zvidzidzo nguva dzose. Asi kana iwe usingashandisi nekambani yepa tech, unogona kufunga kuti haugoni kutedza dhigirii yedijiti. Nenzira yakanaka, izvi hazvina kururama: nekunzwisisa zvishoma uye kushanda zvakaoma, munhu wese anogona kukwanisa chiedza che digital.
Sechinhu chekutanga, zvinobatsira kusiyanisa pakati pekubiri nzira huru: kuzviita iwe pachako kana kushamwaridzana nevane simba. Uye kune dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzaungaita iwe pachako: unogona kuedza munzvimbo dzakange dziripo, ita rako pachako kuedza, kana kuvaka yako chigadzirwa chekuongorora zvakawedzerwa. Sezvauchaona kubva pane mienzaniso iri pasi apa, hapana imwe yenzira idzi dzakanakisisa mumamiriro ese ezvinhu, uye zvakanakisisa kufunga nezvavo sekupa zvipo zvekutengeserana pamakona mana makuru: mari, kutonga, kwechokwadi, uye maitiro (Mufananidzo 4.12).
Mufananidzo 4.12: Chidimbu chekutengeserana kwezvinhu nenzira dzakasiyana-siyana dzaungaita kuti kuedza kwako kuitike. Nokudhura ndinoreva mari kune muongorori maererano nenguva uye mari. By kuzvidzora ndinoreva kuita zvaunoda maererano vanopinza vechikamu randomization, achizivisa marapiro, uye kuyera zvaitika. Nokuda kwechokwadi Ndiri kureva kukwirira kwokuti chimiro chekuita chinosangana neavo vakatarisana muupenyu hwezuva nezuva; cherechedza kuti hukuru hwechokwadi hausi hunokosha nguva dzose pakuedza dzidziso (Falk and Heckman 2009) . Nokutsika tsika Ndinoreva mano evatsvakurudzi vane vavariro dzakanaka kugadzirisa zvinetso zvetsika zvinogona kuitika.